धमला पत्नी कि अनुरागकी हिरोइन ? – An Online Entertainment News Portal
HomeGossipधमला पत्नी कि अनुरागकी हिरोइन ?
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट – असोज १२ गतेबाट रिलिज हुने अनुराग सिनेमा अहिले जे जति चर्चामा छ, त्यसको पछाडि पत्रकार ऋषि धमलाकी पत्नी एलिजा गौतमका कारण छ ।
सन्तानकी आमा बनेपछि एलिजाले यो सिनेमा खेलेकी हुन् । तर, सिनेमा रिलिज भएपछि बक्स अफिसमा चल्नु मात्र ठूलो कुरा होइन ।
यो सिनेमाले एलिजाको परिचय फेर्छ कि फेर्दैन भन्ने हो । एलिजालाई अहिलेसम्म पनि चिनाउन धमला पत्नी भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
उनी धमला पत्नीबाट अभिनेत्री एलिजा बन्न सकिन् भने अनुरागको सफलता मानिन्छ ।
सत्यराजको निर्देशनमा बनेको अनुराग लभस्टोरी कथा हो । म्यूजिकमा लागेको एक यूवा र उसको बाल्यकालको प्रेमको कथामा अनुराग बनेको छ ।
युटुबमा त एलिजा धमला पत्नीको नामले हिट छिन् ।
तर, हलमा एलिजा गौतम बन्न सक्छिन् कि सक्दिनन् होला भन्ने बिषयलाई चासोको रुपमा हेरिएको छ ।
हिरोइन बन्ने उनको चाहनालाई पुरा गर्नका लागि पनि अनुरागले पैसा कमाउनुपर्ने हुन्छ ।
मेलिनाको गीतमा प्रियंकाको ठुम्का
‘म एक परदेशी’बोलको गीत सार्वजनिक